MA-XISHOODE LAGAGAMA XISHOODO | Salaan Media
MA-XISHOODE LAGAGAMA XISHOODO
Xishoodku waa qayb aad u muhiim ah oo ka mid ah Diinteena Suuban iyo dhaqanka
wanaagsan ee Muuminiinta; Diinteenuna in badan bay ka hadashay Xishoodka iyo
sida qofka Muslimka ah loogaga baahan yahay. Iyadoo sidaas loo og-yahay ayaa
hadana dhinaca kalena waxaa jira Qof isagoo ka faa’iidaysanaya Xishoodka Qofka kale isku daya AMA u soo tafaxayta inuu ku kaco ficilooyin aad u foolxun oo xishood la’aan ah. Tusaale, hadii naagi dariiqa isku qaawiso waxaan shaki lahayn in qofka iimaanka lihi ka jeensanayo, halka qofka iimaankiisu yaryahayi Indhaha la sii raacayo. Ma ahan taas oo qudha, balse waxaad arkaysaa laba qof oo arin ku murmaya ama isku khilaafsan, suurto gal maaha in labaduba saxsan yihiin AMA wada khaldan yihiin, balse waxaa dhacda sida badan in midna khaldan yahay midna saxsan yahay, hadaad u sii fiirsatana waxaad arkaysaa in kii khaldanaa isagoo u jeeda khaladkiisa uu hadana ku indho adaygayo. Miyaysan xishood la’i iyo Iimaankiisa oo hooseeya ahayn?.
Hadaan u daadego ujeedada Qoraalkan waxaan qofna daah ka saarnayn in Somaliya
soo martay marxalado adag, Colaad , Abaar iyo Gaajo welina ku jirto, waxayna
Ummaddu gaadhay xili ay yidhaahdaan Illahow hadaad dowlad wanaagsan noo weyday mid xuna ma noo wayday, taasoo macnaheedu yahay in loo baahday dowlad, noocay doontaba ha noqotee. Illahay oo naxariistiisu balaadhan tahay waxuu ajiibay codsigii adoomihiisa waxaana shacabkii qaylinayey u dhalatay Dowladii ay Illahay ka baryayeen.
Waxaa nasiib daro ah in meeshii Ummadda laga sugayey inay dhoob-dhoobaan oo ay ilaashadaan Dowlada u dhalatay, meelaha ay ka liidatana ka kabaan oo dulqaad iyo samir u yeeshaan inlayn Guri 30sano dumayey dhisidiisu 100sano ayay u baahan tahay’e, ay durbaba soo baxeen qaybo ma xishoodayaal ah oo Iimaankooda oo yar awgeed ku ducaysanayey “Illahow dowlad ha na siin hadaysan reer hebel hogaaminayn” taasina waa tan maanta Somaliya ka taagan ee qaar ma xishoodayaal ahi ku doonayaan in Reer Hebel wax noqdo hadii kale dowladi aysan dhalan ama ta jirtaahi burburto; bal u fiirso waxa Shacuubtaasi isku wada raacday Sheekh iyo Shariifba.
Xukuumadda waxa loo dhisay inay ka hortagto Fowdada iyo Colaadaha wadanka ka
jira, inay ka hortagto Colaad Hogaamiye Qabiil ummadda ku habaabinayo, inay ka hortagto Hogaamiye Diimeed banaystay Dhiiga Muslimiinta, Inay ka hortagto
Maxishoode Madaxweyne isugu yeedhay,Inay ka hortagto Niman isu soo Qaawiyey
hiilo Qabiil oon dan guud eegayn, Inay ka hortagto Dhac iyo Boob loo geysto
Qabiil, Dhul AMA Deegaan. Waa arin aan shaki ku jirin in Somaliyi dhigatay oo ku heshiisay qaabka Federaalka, taas macnaheedu maaha ninba meeshuu ku xoogweyn yahay AMA qabsaday ha maamulo balse waa in Xorayn, Nabadayn iyo Heshiisiin marka hore gobolwalba laga hirgeliyo inta aan lagu boodin Boobis Gobol iyo la midoobis Gobol kale oo isaguba tiisa u il-daran daruufaha kor ku xusan awgood.
Waxaan Shaki lahayn inay arintani tahay Maxishoodnimo salka ku haysa Qabiil iyo Qudhin kaasoo Soomaaliya gaadhsiiyey meesha ay maanta Joogto. Xukuumadu ma diidi karto Federaal oo waa sharciga iyada lagu soo doortay balse waxaan meesha ku jurin oon qaban shacabkana loo baahan yahay inay fahmaan in magaalooyin aan XOR ahayn, Nabadina ka jirin in intii Hogaamiye Kooxeed dad isugu yeedho uu yidhaahdo i doorta, ka dibna uu yidhaahdo Maamul Hebel baan ahay oo Intaas oo gobol baa i doortay oon u Taliyaa, Dowlada Dhexena ha i Ogolaato, maahan wax dhegaha Shacabka ku cusub arintani.
Hadaba, “Maxishoode lagama Xishoodo”, hadii Arimo noocan ah ay Dawladu Ogolaatana waxay Ummadda u horseedaysaa Burbur iyo Barakac Hor leh, Waana inay u diyaargarowdaa aqoonsiga Maamulo Beeluhu kaga Dhawaaqaan: Bay-Land “Bay, iyo Gedo”, Shabele-Land “Sh/hose iyo Jubadda Dhexe”, Banaadir-Land “Banadir iyo Sh/dhexe”, Central Region-Land “Hiiraan, Mudug iyo Galgaduud” iyo Qaarkale oo badan. Midwalbana uu dalban doono Aqoonsi. Waxaa hubaal ah in Shacabku gaadhay heer aan MaXishoode laga Xishoon; Xukuumaddana waxaa laga doonayaa inaysan Ma-Xishoode ka Xishoon, se waaba Ma-xishoodee. Waxaa la doonayaa in shacabku iska gartaan waxa lagu khaldayo, ogaadaana in Doodu aysan ahayn Federaal la doonimaayo sida Aqoonyahano badan oo Ummaddu Xushmad u haysayi warbaahinta la taagan yihiin bale Doodu waa: 1) Ma u ogolaanaa in Gobol walba kuwa Hada ugu itaalka rooni Maamul u sameeyaan iyagoo isticmaalaya Awooda iyo Codka Gobolo, AMA Degmooyin kale oon Xor ahayn?.
2) Tan kale waa run Xukuumadda waxaa la dhisay Xamar oon Nabad ahayn, maxaase loo dhisay ma inay Ogolaato in gobolwalba kuwa ugu xooga rooni maamul u sameeyaan? Maya, waxaa loo dhisay inay ka hortagto Fowdada noocaas ah oo ah waxyaalihii Somalia halkaas dhigay. Imisa Madaxweyne ayaa Somaliya ka jira oo dhamaantood is wada magacaabay Gudo iyo Dibadba miyaynu Dhamaantood ogolaanaa? maya. Ha la joojiyo doodaha Ma-xishoodnimada ah ee Dad sumcad bulshada ku dhex lahaa ay maradu kaga dhacayso.
ALI Jama Warsame